Golaha ammaanka oo shir ka leh xaaladda Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Golaha ammaanka oo shir ka leh xaaladda Soomaaliya
Golaha ammaanka Qaramada Midoobay ayaa maanta kulan ka leh xaaladaha amni iyo siyaasad ee Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kulanka todobaadka ee Golaha ammaanka Qaramada Midoobay oo maanta dhacaya ayaa looga hadli doonaan xaaladaha Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada la xariira doorashooyinka la filayo in ay dalka ka qabsoomaan, amniga iyo is faham waaga taagan.
Wakiilka xoghayaha guud Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa lagu wadaa inuu warbixinadii ugu dambeeyay ee dadaalada Qaramada Midoobay u gudbiyo shirkaasi loo dhan yahay.
James Swan, ayaa isku dayaya in uu dusha saarto isku keenidda Madaxda Dowladda Fadaraalka, Dowlada Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, si loo dhameystiro, heshiiskii 17kii September iyo soo jeedintii guddigii ku shiray Baydhabo.
Fadhiga Golaha ammaanka wuxuu ku qabsoomaya muuqaalka fogaan-aragga waxaa dhankooda la dhageysn doonaa danjirayaasha wakiilka ka ah 5-ta dal ee joogtada ah iyo 10-ka kale ee ku yimaada doorashooyinka.